Mgbatị oge ezumike nke Plet na 2020
Akara SPS na Japan Bando Brand sonyere na ngosi ngosi Shenzhen Touchscreen nke 2019
site ha na 19-12-04
Site na November 21st ruo November 23rd, 2019, nnukwu Shenzhen Full Touch na Ngosipụta Ngosiputa na nnukwu ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ mmetụ ihuenyo China na-arụ ọrụ nke ukwuu na Shenzhen Convention and Exhibition Center. Dị ka weathervane nke anụ ụlọ aka ngosi ụlọ ọrụ, nke a gosipụtara ...
SPS na-ekpocha roba na Bando na-ekpocha roba na-aga nke ọma na 2019 Asia-Pacific Network Printing Exhibition
Mkpanaka-ka nsị, usoro ụmụaka gara aga ire ụbọchị: Nnyocha ụlọ oriri na ọ Lanụ Lanụ Lancaster County: June 7, 2019 | Nnyocha ụlọ oriri na ọtaụtaụ
Ngalaba Ọrụ Ugbo nke Pennsylvania, na-eji usoro ịdebanye ihe nyocha dị n'ihe ize ndụ maka ụlọ nri na ndị na-ahụ maka nri ndị ọzọ. Duke on Liberty, 1002 N. Duke St., Mee 13. A naghị echekwa ọkụ ma ọ bụ ihe mgbawa na-agagharị na oyi. Black, ooh fọduru na ice igwe deflector efere; cl ...
Ahịa Scrubber-Dryers Global (2018-2023) site na Productdị Ngwaahịa, Ngwa, Ego, Ohere, Ndị Egwuregwu, Mpaghara
Ahịa Scrubber-Dryers zuru ụwa ọnụ bụ akụkọ nyocha e bipụtara na nso nso a nke na-ekpuchi akụkụ niile nke Global Scrubber-Dryers 2018 yana nyocha zuru ezu nke ihe mmepe ahịa Scrubber-Dryers, usoro ahịa ahịa Scrubber-Dryers, nha, mkpa na ahịa Scrubber-Dryers. nkesa. Ndị ...
Ikwu okwu banyere ihuenyo ebi akwụkwọ nke iko
site ha na 19-06-12
Igwe ihe ngebichi na-ezo aka na usoro ngebichi site na iji efere iko ma ọ bụ akpa iko dị ka ngwaahịa. Ojiji nke iko nwere ogologo akụkọ ihe mere eme na China, ọbụlagodi n'oge nke oge a, iko ka na-arụ ọrụ dị mkpa na ndụ anyị. Ka ọ dị ugbu a, nsogbu akụ na ụba o ...
Screen-ebi akwụkwọ na ihuenyo mmezi Atụmatụ
site ha na 18-03-23
N'agbanyeghị nke ụdị ihuenyo obibi, na ntupu ga-kpochara na degreased n'ihu were. Ọ bụrụ na kwekọrọ ekwekọ degreasing ọrụ na-adịghị eme, na ihuenyo ga-delaminated ma ọ bụ bibie ke ebi akwụkwọ usoro. Ọ bụrụ na ndị net ákwà na-adịghị kpochara na oge, ọ ga-garbled na ihuenyo-ebi akwụkwọ ga-...
Ọ bụ ezie na n'ozuzu nsogbu akụ na ụba na 2015, ma na ihuenyo-ebi akwụkwọ ụlọ ọrụ ka enweta ezi ihe, na nke afọ a, ọtụtụ ihuenyo-ebi akwụkwọ ụlọ ọrụ site ngwaahịa njikarịcha, akụ mwekota na ndị ọzọ na mgbanwe, na-enwe olileanya na ngwa ngwa ijide ndị ụlọ ọrụ ahụ na-enye iwu heig ...
Screen ngwa nbipute na-arụ ọrụ ụkpụrụ iwebata - 1. ụgbọelu ewepụghị na ihuenyo-ebi akwụkwọ igwe ọrụ. 1 ụgbọelu na ihuenyo-ebi akwụkwọ igwe na-arụ ọrụ okirikiri mmemme. Na ikpe nke a ewepụghị halftone ihuenyo ụdị monochromatic ọkara akpaka ihuenyo ebi akwụkwọ igwe, onye nke ya ọrụ cycles bụ: nri → n'ọnọdu → ọdịda ...
Printing network mmeghe na ọrụ ya
Ntụpọ na-ebi akwụkwọ na-egwu a dị nnọọ mkpa. Ntụpọ nwere ike nyefee gradations, na ọkwa, na agba nke image. Ọ bụla reflections ma ọ bụ transmissions mejupụtara ink ahụ ma ọ bụ ọlaọcha ahụ na-etolite a na-aga n'ihu blooming ụda. Nke a blooming ụda ma oyi akwa ga-photographed ma ọ bụ ndị ọzọ meth ...
Olee otú ka mma na ihuenyo-ebi akwụkwọ igwe mmepụta arụmọrụ na-ebi akwụkwọ quality
N'ihi na ndị ahịa ndị na-azụta na ihuenyo na-ebi akwụkwọ, ihe ha na-kasị echegbu bụ ma zụrụ igwe nwere ike nwee uru. Tụnyere omenala ntuziaka arụmọrụ, ọkara akpaka ma ọ bụ n'ụzọ zuru ezu akpaka ihuenyo na-ebi akwụkwọ nwere ndị na-esonụ uru: 1. First, belata oru nleeta. Nke abuo, s ...
2017 Shenzhen Touch Screen ngosi
The 2017 Shenzhen Touch Screen ngosi e mere na November 24 na Shenzhen Convention na ngosi Center. PLET gosipụtawo na FGB faiba glaasi board squeegee, AS carbon eriri board squeegee, na akpaka squeegee grinder. SPS ihuenyo ebi akwụkwọ squeegee na nkewa n'ime atọ ige: ...
Vietnam Screen Printing ngosi 2017
On May 12, 2017, nke abụọ na ihuenyo-ebi akwụkwọ ngosi ẹkenịmde ke Saigon ngosi Center na Ho Chi Minh City, Vietnam. SPS ika squeegee wee akụkụ ke ngosi na ulo oru AS unilateral carbon eriri squeegee. The uru nke AS carbon eriri squeegee: 1, unilateral support bụ m ...
2016 Semiconductor na Microelectronics ngosi
Plet ahọpụta SPS Squeegee Sales na nka na ụzụ Staff ka Gaa Leta Semiconductor na Microelectronics ngosi ẹkenịmde ke Big Sight na Tokyo on January 18, 2016 ịghọta teknụzụ nke ihuenyo-ebi akwụkwọ na-agbanweta ezi ihuenyo ebi akwụkwọ Filiks, n'oge nkwurịta okwu, na ihuenyo-ebi akwụkwọ PR ...
SPS Squeegee abuana ke 2015 CSGIA ngosi
On October 21, 2015, na Shanghai New International Expo Center, SPS ulo oru FGB eriri iko osisi squeegee na M-ụdị mgbaze na-eguzogide wear na-eguzogide akpụcha, nke e n'ọtụtụ ebe ghọtara site ahịa. SPS ika squeegee ka nke Japanese polyurethane squeegee na esichara n'ime ...